Mahazoa fiofanana momba ny tanana amin'ny sehatry ny informatika miaraka amin'ny mari-pahaizana informatika »Hodges U
Sokajy: mpiara-miasa, Bachelor, Teknolojian'ny informatika, Informatika, Featured, Torolàlana an-tserasera, teknolojia
Siansa momba ny solosaina vs.
Andao atomboka amin'ny fototra… Mitady diplaoma amin'ny siansa momba ny informatika na diplaoma momba ny haitao momba ny informatika ianao? Mety hahagaga anao ny valiny.
Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra ny "science science" ho toy ny teny fampiasa amin'ny mari-pahaizana informatika. Ny tena izy dia tsy afaka samy hafa izy roa. Ny mari-pahaizana momba ny siansa momba ny solosaina dia mandalina ny lafiny "siansa" amin'ny solosaina, fa ny mari-pahaizana momba ny haitao sy informatika momba ny informatika dia manomana anao hiara-miasa amin'ny IT indostria.
Manolotra mari-pahaizana momba ny solosaina izahay miaraka amin'ny fifantohana manokana:
Teknolojian'ny informatika is diplaoma azo namboarina izay natao hanomezana ny mpianatra mari-pahaizana hiasa amin'ny sehatry ny informatika ankapobeny ary mamela ny mpianatra hisafidy ny elective izay mifanaraka indrindra amin'ny fahalalany, ny fahaizany ary ny zavatra niainany - mampiavaka azy ireo manokana hahomby.
Cybersecurity sy tambajotra dia mari-pahaizana manome ny mpianatra ny fotoana ahafahana mitrandraka anaty filaminana anaty cyber sy cyberattacks mampiasa simulation sy fitaovana hita any am-piasana mba hahatakarana tsy ny fomba hitrangan'ny fanafihana fiarovana fotsiny, fa ny fomba hisorohana azy ireo.
Software Development dia ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fandaharana ary Coding. Ity dia diplaoma feno ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fampivelarana rindrambaiko SAAS, rindrambaiko mifandraika amin'ny Internet (toy ny famolavolana tranonkala na e-fitaovana), rindrambaiko filalaovana na fampiharana.
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, manokan-tena izahay amin'ny lafiny an-tànan'ny tontolon'ny IT hampidirana anao haingana eo amin'ny sehatry ny asa - miaraka amin'ny fahaiza-manao mety sy fanamarinana manokana momba izany. (Jereo eto ambany raha mila fampahalalana feno momba ny programa diplaomanay)
Colleges mora azo: Mpiara-miasa amin'ny Internet an-tserasera
Ivon-toerana bakalorea: 15 ny mari-pahaizana licence an-tserasera tsara indrindra amin'ny famolavolana sary ho an'ny 2020
Hevitra tsara indrindra amin'ny oniversite: Torolàlana ho an'ny oniversite an-tserasera any Florida
Colleges tsara indrindra: Ny mari-pahaizana licence an-tserasera tsara indrindra amin'ny programa programa informatika an'ny 2020
Sekoly tsara indrindra: Best Degree Design Graphic Cheap Online
Faritra solosaina: Ny bakalorea 20 an-tserasera farany tsara amin'ny teknolojia fampahalalana 2016-2017
Hub momba ny famolavolana sary: Ny mari-pahaizana licence an-tserasera 15 ambony amin'ny famolavolana sary ho an'ny 2020
Hub momba ny famolavolana sary: Mpianatra bakalorea an-tserasera 15 mora vidy indrindra amin'ny fampiroboroboana tranonkala sy ny famolavolana tranonkala 2020
Learn.org: Fandaharam-pianarana bakalorea ambony indrindra amin'ny teknolojia fampahalalana (IT)
Fampiroboroboana amin'ny oniversite lehibe: 20 fifanarahana tsara indrindra amin'ny oniversite kely any Florida
Manan-tsaina: Ny fandaharam-pianarana Degree Design an-tserasera an-tserasera
University University: Sekolim-pahalalana malaza indrindra ho an'ny programa lehibe sy mari-pahaizana momba ny sary an-tsary
Ny mari-pahaizana Master tsara indrindra: Fandaharana an-tserasera an-tserasera 25 tsara indrindra amin'ny taona ambony 2018
Ny sekoly tsara indrindra: Ny mari-pahaizana licence an-tserasera 10 tsara indrindra amin'ny fandaharam-pampianarana programa amin'ny solosaina
Ny sekoly tsara indrindra: Ny diplaoma momba ny lozisialy momba ny lozisialy an-tserasera farany tsara
Ny sekoly tsara indrindra: Ny mari-pahaizana licence an-tserasera tsara indrindra amin'ny programa momba ny informatika
Sekoly sarobidy: Fandaharam-pahaizana licence an-tserasera 10 mora indrindra amin'ny endrika sary 2020
Learn.org: Fandaharam-pianarana licence amin'ny Internet an-tserasera tsara indrindra
Vehivavy amin'ny haitao
Manokatra lalana ho an'ireo vehivavy amin'ny sehatry ny teknolojia na aiza na aiza!
Ao amin'ny Fisher School of Technology, mino izahay fa ny fampidirana ny olona rehetra, ao anatin'izany ny vehivavy sy ireo avy amin'ny vahoaka tsy dia voafaritra firy amin'ny STEM, dia manakiana ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny sehatry ny IT.
Jerevo toy izao, ny orinasa teknolojia amin'ny ho avy dia mitady hevitra vaovao sy vaovao izay mety amin'ny rehetra. Raha tsy misy ny fidiran'ny vehivavy mifantoka amin'ny haitao amin'ny anjara asan'ny mpitarika, ny fampivelarana ny vokatra ampiasaintsika isan'andro dia tsy mahatratra ny filan'ireo vehivavy mampiasa azy ireo.
"Ny tsy takatry ny olona maro dia ny informatika no fototry ny fifehezana siansa, teknolojia, injeniera ary matematika (STEM) rehetra", hoy i Lanham. Ao amin'ny Hodges University, ny Fisher School of Technology dia manolotra mari-pahaizana izay manampy ny mpianatra hampivelatra ny fahaiza-manao ilaina mba hisy fiantraikany tsara amin'ny sehatry ny haitao eo amin'ny sehatry ny orinasanay.
Naseho fa ny tovovavy dia tsy manenjika ny asan'ny haitao amin'ny taham-pahalalan'ny lehilahy mitovy aminy satria tsy tratry ny fitaovana elektronika, rindrambaiko ary kaody amin'ny fahatanorana izy ireo hanenjehana ny diplaoma teknolojia fampahalalana. Raha tokony hiditra amin'ny tontolon'ny oniversite miaraka amin'ny fahalalana mitovy amin'ny mpiara-miasa aminy izy ireo, dia mahatsiaro ao ambadiky ny vehivavy ary miafara amin'ny fandaozana izay mety ho làlan'ny asa tena tsara.
Fandaharana momba ny haitao momba ny informatika
Miaraha amin'ny siansa amin'ny informatika informatika
Ny AS amin'ny informatika momba ny informatika dia manome fototra matanjaka ho an'ny fidirana ambaratonga fidirana amin'ny sehatry ny IT na hahitana ny faritra ifantohan'ny tsirairay rehefa mandroso amin'ny bakalorea bakalorea ianao.
Afaka manomana ireo mpianatra manana fahalalana marobe manerana ireo faritra fampidirana eo amin'ny sehatry ny haitao.
Mety hanomana ireo mpianatra amin'ny birao fanampiana eo amin'ny sehatry ny fidirana na karazana fanohanana ny toerana IT ao amin'ny orinasa rehetra.
Java Programming I dia manome fahatakarana tena ilaina momba ny fandaharana, izay mety hahasoa ny mpianatra rehefa miroso amin'ny sehatry ny fifantohana voafantina izy ireo.
Ny fampianarana A + Hardware I sy II dia misy ny fidirana amin'ny atiny LabSim namboarina manolotra ny mpianatra amina karazana simika virtoaly izay azo ampiharina amin'ny kilasy ho avy sy ny tontolo iainana.
Ny mpianatra dia misafidy ny saha mahaliana azy ary misafidy ireo mpifidy mifototra amin'ny safidiny manokana. Ny haitao ankapobeny momba ny informatika, ny fandaharana ary ny fanaovana Coding, na ny asa aman-draharaha Cyberecurity and Networking dia mety manome ny fototra ilaina amin'ny fikatsahana ny mari-pahaizana bakalorea safidy.
AS amin'ny CIT Sequence
Asa IT-fidirana ambaratonga
Bachelor of science amin'ny informatika informatika
Ny BS amin'ny Teknolojia fampahalalana momba ny solosaina dia ahafahan'ny mpianatra manamboatra ny diplaoman'izy ireo miankina amin'ny fahaiza-manaon'ny tsirairay sy ny fitiavany ny sehatry ny IT.
Ny taranja scripting Powershell dia mety hanolotra ny mpianatra ny fotoana tsy manam-paharoa hahazoana ny traikefa fitantanana tambajotra tena izy ilaina hamoronana sy hampandehanana ireo script azo ampiasaina amin'ny karazana tontolon'ny tambajotra mba hamita ireo asa miverimberina sy sarotra ao anatin'ny fikambanana misy habe rehetra.
Mahazoa ny mari-pahaizana momba ny indostria sy ny diplaomanao miaraka. Ny fanamarinana indostrialy misy dia misy ny MOS, CompTIA A +, CompTIA Net +, CCNA, MCP, CompTIA Security +, & CompTIA Linux +.
Safidio ny làlan'ny Teknolojian'ny fampahalalana momba ny solosaina raha mitady diplaoma marobe ianao izay azo ovaina amin'ny kariera mifantoka amin'ny haitao isan-karazany ao anatin'ny karazana fikambanana.
Ny elective dia mamela ny mpianatra hampiditra cybercurity, tambajotram-pitantanana, fitantanana angona angona, na fahaiza-manao programa rindrambaiko hamolavola diplaoma izay manamboatra ny traikefa amin'ny fianarana hanohanana ny tanjon'ny mpianatra tsirairay avy.
Mety hianatra ny fomba handravana ireo olana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ny mpianatra mba hamaritana vahaolana mifanaraka amin'ny IT, avy eo hamorona làlana azo tanterahina amin'ny dingan'ny fampiharana feno, ao anatin'izany ny fampiofanana ny mpiasa sy ny drafitra fikolokoloana maharitra.
BS ao amin'ny CIT Sequence
Asa momba ny haitao
Fandaharam-pianarana Cyberecurity sy Networking
Bachelor of science amin'ny fiarovana an-tserasera sy ny tambajotra
Ny BS amin'ny Cybersecurity and Networking dia atolotra miaraka amina metodolojika azo ifandraisan-tanana (mampiasa fitaovana tena izy hita ao amin'ny tontolon'ny asa) hitrandrahana vahaolana amin'ny tambajotra, ary ny fisavana ny cyber sy ny fisorohana izay mety hanome anao fahaiza-manao ilaina manomboka amin'ny andro voalohany.
Ny mpianatra dia aseho ny fotoana hianarana ny fomba fampiasana ny herin'ny PowerShell ao anatin'ny tontolo Windows mba hahafahan'izy ireo manararaotra ny asa fitantanan-draharaha manerana ny fikambanana iray manontolo amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanoratana.
Hodges U dia manome milina virtoaly ho an'ny mpianatra hametraka karazana fikirakirana tambajotra maneso hanoratany, hizaha toetra ary hanatanterahana ireo script PowerShell, izay mety hanampy amin'ny fananganana sy fanadiovana ny fahaizany alohan'ny hidirana amin'ny mpiasa.
Mianara vahaolana farany momba ny fiarovana an-tserasera sy ny olana amin'ny tambajotra ankehitriny avy amin'ny mpampianatra izay manana traikefa azo ampiharina eo amin'ny sehatra. Mihainoa satria ny profesora anao, izay miasa ao amin'ny masoivohon'ny governemanta, dia manome ohatra tsy mitombina amin'ny fiainana an-tserasera ary manazava tsy ny fomba nanararaotana ny fanafihana ihany, fa koa ny fomba hisorohana izany. Ity fahalalana ity dia nadika ho amin'ny fiofanana amin'ny fomba hahitana tsara sy hiarovana ny fikambanana amin'ny cyberattack, ary koa ny fomba handaminana sy hamaranana ny andrana fandaminana aorian'ny fanafihana mahomby natao tamina fikambanana iray.
Afaka nanitatra ny fahaizan'ny fiarovana azy ireo ny mpianatra tao amin'ny taranja Hacking Ethical. Ny mpianatra dia tafiditra ao anaty tontolo iainana ifandraisana izay anehoana azy ireo ny fomba fanaovana scan, fitsapana, hack ary fiarovana ny rafitr'izy ireo. Ny tontolo iainana feno laboratoara dia mamaky ny mpianatra tsirairay amin'ny fahalalana lalina sy traikefa azo ampiharina amin'ny rafitra fiarovana ilaina ankehitriny.
Ny efitranonay IT dia mihazakazaka amin'ny tamba-jotra tsy miankina izay mamela ny mpianatra hampiasa rindrambaiko simulation amin'ny tambajotra, ny fandinihana ny fiarovana ary ny famakafakana ny tranga. Ity fahafaha-manaha-tahaka ity dia mety hanampy ny mpianatra hampivelatra sy hanamafy ny fahaiza-manaon'ny cyber sy ny tambajotra amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hanao fitsapana sy hanaingo ny toe-javatra ho an'ny tena fiainana, fianarana amin'ny fotoana tena izy izay mameno ny fomba fampianarana nentin-drazana.
Hanana fotoana ahafahan'ny mpianatra mamorona tambajotra virtoaly isan-karazany miaraka amina serivera sy toeram-piasana, mianatra ny fomba fampandehanana tambajotra habe amin'ny fomba mahomby sy mahomby, ary hianatra ny fomba hamantarana, hamahana ary hisorohana ireo karazana fandrahonana fiarovana amin'ny loharanom-pahalalana tambajotra iray an'ny fikambanana.
BS ao amin'ny Cyberecurity & Networking Sequence
Mpiasa arisiteran'ny Network Network
Fandaharana momba ny fivoarana lozisialy (Coding sy Fandaharana informatika)
Bachelor of science amin'ny fampandrosoana ny lozisialy
Ny BS amin'ny fampandrosoana ny lozisialy dia mety hanomana anao hamorona zavatra tsara. Na liana amin'ny famoronana rindrambaiko, fampandrosoana an-tranonkala, na tontolon'ny filalaovana ianao, dia voasaronanay ianao.
Java Programming II dia mety hanome ny mpianatra fampiharana fampiasa amin'ny fandrosoana mandroso. Ireo mpianatra dia afaka mahazo fahaiza-manao amin'ny fanoratana kaody rindrambaiko sarotra izay manatsara ny fotoana fampiharana sy ny toerana fitahirizana izay mila ampiasain'ny programa rindrambaiko araka ny tokony ho izy.
Manarona olana ara-piarovana marobe izay matetika hita ao amin'ny programa rindrambaiko izahay ary mety ho vonona ny mpianatra hanangana kaody fohy, tena miasa ary azo antoka.
Mahazoa hevi-baovao momba ny fomba fampiharana ireo fahaiza-manao ianaranao amin'ireo tontolon'ny IT tena izy avy amin'ireo profesora miasa ao amin'ny indostria.
Ho an'ireo mpianatra manenjika lalao dia manome torolàlana amin'ny Fampidirana ny Fandaharana momba ny Lalao sy ny Fampivoarana ny Fampiharana Finday miaraka amin'ny Fampandrenesana Aterineto sy ny Databases amin'ny Internet.
Ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fampiroboroboana rindrambaiko miorina amin'ny tranokala, dia manolotra torolàlana momba ny Programming Java, Concepts Programming II, Web Design I, Applications Organisational of Social Media and Collaborative Technologies, e-Commerce, Mobile Application Development, ary Internet Application Programming and Databases.
Ny mpianatra dia manana fotoana hianarana fiteny fanaovana coding ao anatin'ny fandaharam-pianarana misy azy ireo, fa tsy mila tobin'ny boot. Hodges U dia manome fampianarana any Java, Python, XML / Java (fivoarana ny app), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
Ampiasao ny fahaiza-manao momba ny kaody izay nianaranao tamina tetik'asa toy ny famoronana rindranasa Android, famolavolana programa rindrambaiko amin'ny alàlan'ny Java, na famoronana lalao fototra mampiditra raki-tsarimihetsika, sarintany misy tile, ary fitodihana any aoriana mba hanatsarana ny traikefa ankapobeny an'ny gamer.
Mianara mandanjalanja ny fahaizanao amin'ny kaody miaraka amin'ny famoronana fanandramana tsara ho an'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny.
BS amin'ny fampandrosoana ny lozisialy
Asa fampandrosoana ny lozisialy
Inona no mampiavaka an'i Hodges?
Raha mikasa hianatra diplaoma mifandraika amin'ny solosaina ianao dia mety te hahafantatra ny antony tokony hanatrehanao ny Hodges U. Ny fandaharanay dia noforonina manokana hanomezana anao vokatra ho an'ny tetikasa sarotra, mifandray amin'ny IT.
Fampianarana IT mifandraika amin'ny indostria izay namboarina mba hananganana fahalalana tena ilaina rehefa mandroso amin'ny alàlan'ny lalànan'ny diplaoma voafantina ireo mpianatra.
Ny fianarana ifotony dia ivon'ny taranja IT tsirairay avy. Hodges U dia mandray lesona mavitrika amin'ny ambaratonga vaovao amin'ny alàlan'ny fanomezana laboratoara simulasi, milina virtoaly ary tambajotra virtoaly ho an'ireo mpianatra mba hitsapana ny fahaizany sy ny fahalalany alohan'ny hangatahana azy ireo hanao eo amin'ny sehatry ny asa.
Ny mpianatra tsirairay dia ampahafantarina ny fototry ny fandaharana amin'ny alàlan'ny Java ary mianatra mampihatra foto-kevitra momba ny programa mba hamita ireo laharam-pahamehana amin'ny famolavolana lozisialy. Mahazo manararaotra manoratra programa tsotra ireo mpianatra izay maneho ny firaisan'ny lozisialy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tambajotra sy ny kaody fiarovana.
Ny fitantanana ny tetikasa dia ampidirina ao anatin'ny programa diplaoma IT rehetra mba hampiroboroboana ny fahaiza-manao izay hanampy ny mpianatra hitantana tetik'asa informatika maro miaraka hita ao amin'ny tontolon'ny asa ankehitriny.
Ireo mpianatra dia afaka manala fanadinana fanamarinana indostrialy ao Hodges U amin'ny taha-pahavitranan'ny mpianatra, na ho fanamarinana mitokana na ho ampahan'ny asa ampianariny. Rehefa nahazo diplaoma dia afaka mahazo mari-pankasitrahana manokana koa ireo mpianatra ho fanampin'ny diplaoman'izy ireo.
Ny diplaoman'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao BS dia mifarana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana Systems Analysis & Solutions. Ity fampianarana ity dia manome ny mpianatra fotoana hanehoana ny fahalalany ny fomba hanovana ny fitakiana orinasa amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny fiainana mandroso ny rafitra mba hamokarana drafitra farany hampiharana rafi-panazavana mifangaro ao anatin'ny fikambanana iray, ka hanome porofo fa vonona handray ilay mpianatra. amin'ny asa IT ao anatin'ny sahan'izy ireo manokana.